Loolanka dugsiyada iyo madarasadaha ee tuulooyinka iyo cidhib-xumada ka dhalata. Waxaa qorey, Guuleed Axmed Xaashi. | HADHWADAAG NEWS
Home Maqaalo Loolanka dugsiyada iyo madarasadaha ee tuulooyinka iyo cidhib-xumada ka dhalata. Waxaa qorey,...
Loolanka dugsiyada iyo madarasadaha ee tuulooyinka iyo cidhib-xumada ka dhalata. Waxaa qorey, Guuleed Axmed Xaashi.
Badanaa tuulooyinka marka la joogo waxaa jira loolan adag oo u dhaxeeya Madarasadaha iyo Dugsiyada, muddo dheer oo aan hawlo shaqo ku marayay dhul badan oo Deeganada Somaliland ah, waxaan u kuur galay cawaaqib-xumada ka dhalata loolanka u dhexeeya Madarasadaha quraanka lagu dhigo iyo dugsiyada oo inta badan ah kuwa dawladu maamusho. Intii aanay inagu soo badan aqoonta casriga ah iyo dugsiyadu waxaa dhaqan inoo ahayd in caruurta la geeyo malcaamado quraanka lagu dhigto. Dugsiyadu waxay la kowsadeen Jumaystihii dalka yimid, sida uu maqaal uu qoray Siciid Jaamac Xuseen ku xusay waxaa dugsiyadii ugu horeeyay laga sameeyay magaalooyinka Berbera iyo Buloxaar taariikhdu markii ay ahayd 1891, dadkii Soomaalida ahaa ee wakhtigaa noolaa waxay si xoog le oga soo horjeedsadeen in caruurtooda la geeyo dugsiyada iyaga oo u arkayay in caruurtooda gaalnimo la barayo.
Fikirkaa ahaa in dugsiyada diinta caruurta lagaga saaro saamayntiisii ayaa ilaa hadda ka jirta tuulooyinka oo aan helin wacgalin fiican oo ku saabsan faa’idada dugsiyada awgeed ayaa waxaa jira deegaano badan oo ilaa hadda oo aynu joogno 2021 dugsiga aan loo arag wax qiimo le. Qaar ka mid ah wadaadada ku shaqaysta madarasadaha ayaa ilaa hadda faafiya in ilmaha aan markaliya loo wada dhigi Karin quraanka iyo dugsiga, fikirkani wuxuu taageero xoogan ka helay badanaaba dadka ku dhaqan tuulooyinka oo aaminsan in aan laga hor iman Karin macalinka quraanka dhiga taladiisa. Badanaa tuulooyinka waliba ha u badnaadaan kuwa bariga Somaliland waxaa ka jira loolan adag oo u dhaxeeya dugsiyada iyo madarasadaha, loolanki wuxuu deeganada ku sababay in cadaaawad hoose dhex taalo hawlwadeenada dugsiyada iyo kuwa madarasadaha, dhibaatada ugu weyn ee ka dhalata loolankaasina wuxuu yahay in ardayda la qorayo dugsiyadu aad u yaraadaan kadib dugsiyada tuulooyinku ay noqdaan meelo magac u yaala oo aan awoodin in ay soo saaraan arday badan oo u gudubta dugsiyada sare.
Haddaba madarasada oo kaliya ma anfacaysaa ilmaha tuulada jooga?
Aqoonta ay madarasadu bixisaa waa Quraanka Kariimka ah qa kooban ayaa u raaciya barashada diinta sida kitaabo kookooban oo caruurta lagu barayo tarbiyada guud, marka caruurta quraanka dhammayso ma jirto meel kale oo ay ka helayaan aqoon dheeraad ah oo diinta ku saabsan, waxaa intaa dheer in ilmo dhawr sano lagu hayay madarasada la doono in la qoro dugsiga xili uu dhaafay wakhtigii qayrkii dugsiga lagu qorayay, tani waxay keentaa in ilmuhu dugsiga si dagdag ah oga baxo sababta oo ah Ilmuhu wuxuu dhaafay da’adii loogu talo galay in dugsiga lagu qoro, tusaale ahaan fasalka koowaad ee dugsiga waxaa loogu talo galay in ilmaha 6 jirka ah la qoro, ilmaha madasarada ka jimid waxaa laga yaabaa in uu 10 jir yahay ama uu ka weyn yahay, tani waxay ilmaha ku keentaa cuqdad waayo wuxuu la fasal noqonayaa caruur ka da’yar.
Badanaa caruurtii Madarasada oo kaliya lagu daayay aakhirkii waxay ku dambeeyeen in ay balwadaha iska dhex galaan iyada oo quraan la xifdisiiyay markii ay waayeen meelo kale oo ay aqoonta kasii wataan dugsigiina ay ka waaweynaadeen.
Sidee ayuu deegaanka Balicabane u xaliyeen loolanka dugiyada iyo madarasadaha ka dhexeeya?
Deegaanka Balicabane waxay xal wax ku oola u heleen loolanka u dhexeeya Madarasada iyo dugsiga, deegaanka waxaa ku yaal Madarasada sifiican u shaqaysta oo hablo iyo wiilalba dhigtaan iyo dugsi arday fiicani ay dhigato, waxaa jooga macalin madarasada maamula oo aqoon fiican u leh tarbiyada iyo quraanka, si ayna u dhicin kala jiidashada arday ee u dhexeeya madarasada iyo dugsigu waxay gudida magaaladu sameeyeen nidaam iyo hab aad u wanaagsan oo xal u noqon kara loolanka.
Macalinka madarasada ayaa shaqo laga siiyay dugsiyga, waxaa loo qaatay in uu noqdo macalinka carabiga iyo tarbiyada ka dhiga dugsiga galinka hore, galinka dambe waa macalin madarasada. Waxaa la kala duway in madarasada iyo dugsigu isku galin noqdaan. Habkani wuxuu Meesha ka saaray in dugsiga iyo madarasadu kala jiitaan ardayda, sidoo kale waxaa la mideeyay dadaalka dugsiga iyo madarasada ee ah in caruurta wax la baro, marka sidaa caruurtu u qadayso waxay tagaan madarasada oo uu ugu diyaar yahay macalinkii saaka tarbiyada iyo carabiga u dhigayay, caruurta waxay noqonayaan kuwa aan quraankiina seegin aqoontii dugsigana aan seegin.
Habkani waa ka ugu wanaagsan oo lagu hubin karo in tuulooyinka caruurta joogtaa aan la jaho wareerin lana seejin mustaqbalkooda, marka deegaanku fahmo dhibaatada loolanka ka dhexeeya dugsiyada iyo madarasadaha waxaa sahlanaanaya in caruurtu ay helaan aqoon iyo tarbiyad isku dhafan oo macalinka dugsiga jooga iyo kan madarasadu ay isku hadaf yihiin sidii caruurta loo barbaarin lahaa.
Tijaabada Balicabane waa tijaabo ku dayasho u baahan oo laga fulin karo deegaano badan oo ay ragaadiyeen khilaaf iyo loolan aan macno lahayn oo ka dhexeeya dugsiyada iyo madarasadaha dalka.
Previous articleCiidanka Qaranka Somaliland ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb qaatay ololaha nadaafadeed ee laga bilaabay magaalada Burco.
Next articleEng Faysal cali Waraabe Oo Ka Sheekeeyey Qaabkii Dawladii Siyaad Barre u Shirqooshay Muj Fanaan Abwaan Maxamed Mooge Liibaan.